Author Topic: Rekha Thapa (रेखा थापा) Nepali Actress (Read 269874 times)
« Reply #60 on: January 19, 2010, 06:10:12 AM »
« Reply #61 on: January 19, 2010, 06:11:34 AM »
« Reply #62 on: February 03, 2010, 12:17:52 PM »
सबैभन्दा छिटो नाम र दाम कमाउन सफल नायिका
सुमन गैरे, काठमाण्डौ, २०६६ माघ १९, मंगलवार
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो नाम र दाम कमाउन सफल नायिका हुन् रेखा थापा । २०५७ सालमा चलचित्र 'हिरो' बाट नेपाली रजतपटमा पाईला टेकेकी यि नायिकाले करिब ९ बर्षको आफ्नो अभिनय यात्रामा ९० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गर्न भ्याएकी छिन् । चलचित्रको अभिनय सँगसँगै उनी ५ चलचित्रको निर्मात्री समेत बनेकी छिन् ।
चलचित्र 'हिरो' बाट खासै चर्चा नपाएकी रेखाले २०५९ सालमा अशोक शर्माले बनाएको चलचित्र 'मितिनी' बाट उनी निकै चर्चामा आईन् । चलचित्र 'मितिनी' को सफलता सँगै उनलाई कहिलै पछाडी फर्केर हेर्न परेन । चलचित्र क्षेत्र नाम र बदनाम दुबै भएको ठाउँ हो र उनलाई थुप्रै आरोपहरू पनि लागे । तर पनि ति आरोपहरूबाट कत्ति पनि बिचलित नभई कडा मेहनतका साथ लगनशिल भएर चलचित्र क्षेत्रमा काम गरेकोले यस क्षेत्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित भएको उनको भनाई छ ।
अजम्बरी नाता, हिम्मत र किस्मतको सफलता सँगै नायिका थापाले 'हिफाजत' र 'कस्ले चोर्यो मेरो मन' निर्माण गरेकी छिन् । चलचित्र 'हिफाजत' चैत २७ गतेदेखि देशभर एकसाथ प्रदर्शन हुने भएको छ भने चलचित्र 'कस्ले चोर्यो मेरो मन' को प्राबिधिक कार्य भईरहेको छ । रेखा थापा, आर्यन सिक्देल र नवनायक आयुस रिजाल बिचको त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित 'हिफाजत' को निर्देशन ज्ञानेन्द्र देउजाले गरेका छन् । डिजिटल फर्म्याटमा निर्माण गरिएको यस चलचित्रको निर्माता छविराज ओझा र दिजेन्द्र शाक्य हुन् । चलचित्रमा महेश खड्काको संगीत, राजेन्द्र खड्गीको द्वन्द्व निर्देशन र विष्णु कल्पितको छायाँकन रहेको छ ।
« Reply #63 on: February 04, 2010, 09:55:30 PM »
'साथी म तिम्रो'को ५१ औं दिन!
बिहिवार, 04 फेब्रुअरी 2010 21:19 नागरिक
काठमाडौं, माघ २१ (नागरिक) - ललितपुरको सानेपास्थित 'इन्टरनेसनल क्लब'मा फिल्मकर्मीको जमघट बाक्लो छ। लोडसेडिङले सहर अन्धकार बने पनि त्यहाँ उज्यालोको कमी छैन। झिलिमिली बत्ती, सबैको हातमा मदिराको ग्लास। कुनै उत्सवको संकेत गर्थ्यो त्यहाँको वातावरणले। हिरोइन रेखा थापा सबै भन्दा प्रशन्न मुद्रामा देखिइन्।
उनलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ। 'अब अरू हिरोइनका दिन गए। तपाईंका अगाडि कोही टिक्दैन,' कलाकार किरण केसी र निर्मल शर्मा उनलाई फुर्क्याउँदै छन्। दुईवटा फिल्म निर्देशन गरेका दिनेश डिसीको 'नखरा' बेग्लै छ। आगन्तुकलाई उनी चोर औंला र बुढी औंलाको बीचबाट हेर्छन्। 'फ्रेमिङ' गरे जसरी। र, बोल्छन्, 'तपाईं किन लङ सटमा? नजिक आउनुस्।' रक्सीको ग्लास पनि त्यसरी नहेरी उनी उठाउँदैनन्।
शिव श्रेष्ठ, राजवल्लभ कोइराला, निरज बराल, वीरेन श्रेष्ठ, उषा पौडेल, निशा सुनार लगायतका चर्चित कलाकारको भीडमा अर्को परिचित अनुहारको 'इन्ट्री' हुन्छ। बाक्लो जुँगा, सेतो सुट र अलिक आश्चर्य झल्काउने मुस्कानका साथ भुवन केसीको। जब रेखाको उनीसँग आँखा जुध्छ, पृष्ठभूमिमा गीत बज्न थाल्छ, 'साथी म तिम्रो...।'
'कट इट' निर्देशक शिव रेग्मी चिच्याएपछि फिल्ममा निर्देशकको रूपमा अभिनय गर्न पाएका डिसी पाखा लाग्छन्। फिल्म वितरकको भूमिका निर्वाह गरेका किरण र निर्मलको पनि त्यहाँ काम हुँदैन। बरु निर्माता बनेका भुवन र उनकै फिल्मबाट 'ब्रेक' पाई रातारात हिट भएकी रेखाको नाच सुरु हुन्छ। अबको जिम्मेवारी नृत्यनिर्देशक कविराज गहतराजको जिम्मामा।
'यो नेपाली फिल्मको वास्तविकता झल्काउने फिल्म हो। म पीडित निर्माताको भूमिकामा छु। रेखाले खेलेको फिल्मले ५१ औं दिन मनाएको सुनेर बधाई दिन आएकों,' फुर्सदमा भुवनले भूमिका सुनाए। रेखाले ठट्यौलो पारामा थपिन्, 'म त रियल लाइफमा जस्तै सुपरहिट हिरोइनको भूमिकामा छु। फरक यति हो यसमा भुवन केसीले ब्रेक दिएको देखाइएको छ।'
फिल्मको ५१ औं दिने उत्सवको सेट तयार गरिएको थियो त्यहाँ। यसलाई स्वाभाविक देखाउन भुवनले चर्चित फिल्मकर्मीलाई निम्त्याएका थिए। एउटामात्र दृश्यमा अभिनय गर्न आग्रह गर्दा समेत सहजै उपस्थित भएका शिव श्रेष्ठलाई उनी 'धन्यबाद' भन्न खोज्दै थिए। शिवले उछिने, 'तैले आज मेरो एक्टिङ देख्ने भइस्। अनि नर्भस चाहिँ नहो है।'
« Reply #64 on: February 07, 2010, 10:53:25 AM »
« Reply #65 on: February 14, 2010, 02:40:31 PM »
हिरोइन रेखा थापालाई चुम्बन गर्दै श्रीमान् छवि ओझा। तस्विरः सन्तोष रिमाल
(on valentine day 2010)
« Reply #66 on: February 14, 2010, 02:41:54 PM »
आइतवार, 14 फेब्रुअरी 2010 07:09 नागरिक
लाखौं दर्शकका मुटुको धड्कन रेखा थापा। उनै रेखाको मनमा बसेका छन् छवि ओझा। रेखा र छविको प्रेमकथामा सन्तोष रिमालको पटकथा, संवाद :
पात्र : रेखा थापा, छवि ओझा, अन्य कलाकार
समय : साँझ
स्थान : राष्ट्रिय सभागृह
'राष्ट्रिय फिल्म अवार्ड २०६५' आयोजना हुँदैछ। सर्वोत्कृष्ट नायिका घोषणा हुने पालो आएकाले मनोनयनमा परेकाहरू सास रोकेर बसेका छन्। तीन सेकेन्डको निस्तब्धतापछि उद्घोषक नाम घोषणा गर्छन्, 'यस वर्षकी सर्वोकृष्ट नायिका रेखा थापा, चलचित्र किस्मतबाट।'
उज्यालो पोसाकमा मञ्चतिर उक्लँदा रेखा मधुरो प्रकासमा पनि चम्किएकी छन्। नायिकाका रूपमा उनले पाएको यो सबभन्दा ठूलो अवार्ड हो। हर्षको त्यो घडीमा उनलाई केही बोल्नु छ। माइक्रोफोनअगाडि निकै हाउभाउ देखाउने रेखा केही गम्भीर र खुसीले हड्बडिएको आवाजमा भन्छिन्, 'आई लभ यु, छवि। तिमीले नै मलाई आज यति ठूलो अवार्डका लागि लायक बनायौ।'
रेखा थापा र छवि ओझाको वैवाहिक सम्बन्धबारे जानकारहरू पनि चित खान्छन्। यो सम्बन्धबारे हम्मेसी रेखा आफै खुल्न चाहँदिनथिन्।
रेखा बोलिरहँदा टेलिभिजनमा छविको 'इन्सर्ट' देखिन्छ। रेखाले जस दिएपछि उनी भावविभोर हुन्छन्। टेलिभिजनमा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका दर्शकले सजिलै बुझ्छन्, 'चञ्चले, चुलबुले र जंकी देखिने नायिकाले बिहे त आफूभन्दा दोब्बर जेठो केटासँग पो गरेकी रहिछन्।'
पात्र : छवि ओझा, नरेश पौडेल र केही सहायक कलाकार
समय : दिउँसो
स्थान : सागर ढुंगेलको अफिस
छवि ओझा फिल्म निर्माता हुन्। २०४० सालमै 'युगदेखि युगसम्म' बनाएका ओझा २०५७ सालमा 'हिरो' फिल्मका लागि नायिकाको खोजीमा छन्। त्यतिखेर नायिका सज्जा मैनालीले सागर ढुंगेलको फिल्म 'यस्तै हुन्छ पिरती' मा निकै राम्रो काम गरेको चर्चा छ। छवि यसैलाई पछ्याउँदै सहकर्मी नरेश पौडेलका साथ सज्जालाई भेट्न सागरको अफिस पुग्छन्।
अफिस सहायक (छविलाई देखेर कुर्सीबाट उठ्दै) : दाइ नमस्कार, हजुरलाई बसिराख्नू भन्नुभा'छ, सागर सर आउँदै हुनुहुन्छ।
एकछिन कुर्नुपर्ने भएपछि उनी टेबलमाथि छरिएका पत्रिका पल्टाउन थाल्छन्। उनका आँखा पर्छन् एउटी सुन्दरीको ब्लोअपमा। भर्खरै मिस कोसी भएकी ती मोडलको तस्बिर देखेपछि उनी जुरुक्क उठ्छन्।
छवि (नरेशतिर हेर्दै) : हिरोइन भेटियो। अब जाऊँ।
नरेश आश्चार्य मान्छन्। तर केही नसोधी खुरुखुरु छविको पछि लाग्छन्।
पात्र : रेखा थापा र रेखाकी ममी
समय : बिहान
स्थान : रेखाको विराटनगरस्थित घर
काठमाडौंमा चर्चित फिल्म निर्माता छवि ओझा आफ्नो खोजीमा रहेकोबारे बेखबर छिन् रेखा।
भर्खरै १० कक्षा पढिरहेकी उनलाई मोडलिङमा रुचि छ। मिस कोसीको पगरी गुथेपछि त सहरभरि उनको चर्चा बढेको छ। योसँगै बढेको छ घरमा आउने टेलिफोन कलहरू पनि, केही शुभचिन्तकले बधाई दिन, धेरै अल्लारे केटाहरूले हैरान पार्न।
रेखाले अचेल टेलिफोन उठाउन छाडेकी छन्। वा भनौं, घरमा उनलाई टेलिफोन उठाउन दिइँदैन अल्लारे केटाहरूका बेफ्वाँकका कुरा सुन्नुपर्ला भनेर। तैपनि घरमा फोनको घन्टी बज्ने क्रम भने रोकिएको छैन।
खाटमा पल्टेर पत्रिकाका पाना पल्टाइरहेकी रेखा झस्कन्छिन्। उनलाई लाग्छ, फेरि कसले दुःख दिने भयो। उनकी ममी भान्छाबाट दौडँदै आएर फोनको रिसिभर उठाउँछिन्।
रेखाकी ममी : हेलो
उताबाट आवाज आउँछ।
आवाज : हेलो, रेखालाई पाऊँ न।
पुरुष आवाज सुन्नेबित्तिकै रेखाकी ममी झोक्किन्छन्।
रेखाकी ममी : छैन रेखासेखा।
उनी ड्याम्म आवाज आउनेगरी रिसिभर राख्छिन्। अनि फत्फताउन थाल्छिन्।
रेखाकी ममी : यी अचेलका केटाहरू काम पाउँदैनन्। तरुनी केटी देख्नै हुन्न। लाइनै काट्दिऊँजस्तो लाग्छ मलाई त।
उनी फत्फताउँदै भान्छामा पुग्न भ्याएकी हुँदिनन्, घन्टी फेरि बज्छ।
रेखा पत्रिका फ्यात्त खाटमा फ्यालेर जुरुक्क उठ्छिन्। त्यत्तिकैमा उनकी ममी आउँछिन्।
ममी : भोभो, तैंले उठाउनुपर्दैन। यसलाई त मैले जानेकी छु।
उनी रिसिभर उठाउँछिन्। यसपटक भने उनले 'हेलो' भन्न नपाउँदै उताबाट आवाज आउँछ।
आवाज : हजुर सुन्नुस् न, म छवि ओझा बोलेको, फिल्म निर्माता। रेखा छ होला?
ममीको मुखबाट आवाज निस्कँदैन। उनी रेखालाई हेरेको हेर्‍यै हुन्छिन्। रेखा पनि 'के भो' भन्ने संकेतमा हात हल्लाउँदै उनलाई हेरिरहन्छिन्। उताबाट फेरि आवाज आउँछ।
आवाज : होला, रेखा छैन घरमा?
ममी (हड्बडाउँदै) : छ, छ, एकछिन होल्ड गर्नुस् है।
(एक हातले फोनको रिसिभर छोप्दै सानो स्वरमा) ए रेखा, छवि ओझा, छवि ओझा
रेखा : छवि ओझा
उनी खुसीले फेरि खाटमा पल्टन्छिन्।
ममीको एउटा हातले अझै रिसिभर छोपिरहेकै छ।
ममी : ए, आइज न छिटो, कहाँ पल्टेकी?
रेखा दौडँदै फोन उठाउन आउँछिन्।
पात्र : रेखा थापा, उनका दाजु र नरेश पौडेल
स्थान : छविको अफिस
रेखा आफ्ना दाजुका साथ छविको अफिसमा छिन्। कोठामा लामा दाह्री जुंगा पालेका, देख्दै डरलाग्दो व्यक्ति छन्। ती नरेश पौडेल हुन् तर रेखालाई लाग्छ तिनै हुन् छवि ओझा।
रेखा : म रेखा थापा। फिल्म खेल्न चाहन्छु।
नरेश पौडेल : यसो गर्नुस्, भोलि आउनुस् न एकताल, है!
रेखा दाजुका साथ कोठाबाट बाहिरिन्छिन्। उनको मनमा कुरा खेलिरहेको छ।
रेखा (मनमनै) : यस्ताले बनाएको फिल्म के खेल्नु। हेर्दै डाँकाजस्तो छ।'
पात्र : रेखा थापा
स्थान : काठमाडौंस्थित रेखाको घर
रेखा कोठामा दिक्दार मानेर बसिरहेका छिन्। उनले छविको फिल्म नखेल्ने निर्णय गरिसकी। तैपनि, छविको अफिसबाट फोन आएको-आयै छ।
रेखा रिसिभर उठाउँछिन्। उताबाट छविको आवाज आउँछ।
आवाज : रेखा, म छवि। आज हामी भेट्न सक्छौं?
रेखा : हेर्नुस्, तपाईंको अफिस मलाई एकदमै टाढा पर्छ। म आज आउन भ्याउँदिनँ।
आवाज : त्यसो भए म लिन आउँछु नि त।
रेखा केही बोल्न सक्दिनन्।
पात्र : रेखा थापा र छवि ओझा
स्थान : रेखाको घरबाहिर
रेखा छवि ओझालाई कुरिरहेकी छन्। छवि मोटरसाइकलमा आउँछन्। उनले हेल्मेट फुकालेपछि नौलो मान्छे देखेर रेखा अचम्म मान्छिन्।
रेखा : मलाई लिन त छविजी आउने कुरा थियो नि?
छवि : मै त हो नि, छवि।
रेखा : नचाहिने कुरा। अस्ति त अर्कै मान्छे भेटेको थिएँ।
छवि : को मान्छे?
रेखा : दाह्री पालेको, डरलाग्दो थियो, तपाईंकै अफिसमा भेटेको।
छवि : ए, त्यो त नरेश पौडेल भइहाल्यो नि।
रेखाले बल्ल बुझिन्, जसलाई उनी छवि सम्झेर तर्सेकी थिइन्, त्यो त उनको बिजनेस पार्टनर नरेश पो रहेछन्!
कन्फ्युजन अन्त्य भएकाले दुवै बेस्सरी हाँस्छन्।
पात्र : रेखा थापा, छवि ओझा
छविको अफिसमा रेखाको आउनेजाने क्रम बढेको छ। वर्षौंदेखिको हिरोइन हुने सपना पूरा हुन लागेकाले रेखा दंग छिन्। अफिसमा छवि रेखालाई ध्यान दिइरहेका हुन्छन्। उनको खानपिन, घरबाट ल्याउने-लैजाने यस्तामा उनी विशेष चासो राखिरहेका छन्।
रेखालाई पनि छवि अभिभावकजस्तो महसुस भइरहेको छ। उमेर र बानी दुवै हिसाबले। आफूले भर्खरै पाइला टेक्न लागेको क्षेत्रमा वर्षौं बिताएका छविको मार्गदर्शन पाएर उनी त्यसै पनि सुरक्षित ठानिरहेकी छन्। चञ्चले, चुलबुले रेखाको हाउभाउबाट उनी छविसँग खुल्दै गइरहेको स्पष्टै हुन्छ।
एकदिन अफिसमा रेखा र छविमात्र थिए। छवि उनलाई एउटा पत्रिका देखाउँछन्, जसमा 'निरुता सिंह गर्भवती भइन्' भन्ने खबर छापिएको छ।
छवि : यी हेर हिरोइन भएपछि यस्तायस्ता आरोप लाग्छन्।
रेखा केही बोल्दिनन्।
छवि : त्यही भएर भनेको हिरोइन बन्ने सपना छाड्देऊ। राम्रोसँग पढ, अनि ठूलो जमिनदारको छोरासँग बिहे गर।
रेखा (जिस्कँदै) : किन र, हिरोइनलाई कसैलाई बिहे गर्दैन? उसो भए विपनालाई कसैले बिहे गर्दैन, निरुतालाई कसैले बिहे गर्दैन?
छवि निरुत्तर हुन्छन्।
रेखा (मनमनै सोच्छिन्) : एयर होस्टेसको अफर छोडेर फिल्म खेल्न आएकी छु, हिरोइन त भएरै छाड्ने हो।
पात्र : रेखा थापा, छवि
रेखा रिसाउँदै छविसँग कुरा गरिहेकी छन्।्
रेखा : छवि सर, के हो यो? मलाई हिरोइन बनाउने भनेर डाक्ने, अनि अहिले राजेश हिरो पाएपछि मलाई निकाल्न खोज्ने।
छवि केही बोल्दैनन्।
त्यतिखेर 'हिरो' फिल्ममा राजेश हमाललाई नायक लिने निश्चित भइसकेको थियो। राजेशसँग रेखाको जोडी जम्दैन भनेर उनलाई फिल्मबाट निकाल्ने हल्ला चलेको थियो। रेखा त्यसै विषयमा छविसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्।
रेखा : तपाईंले त्यही भएर मलाई फिल्म नखेल, पढाइ गर, जमिनदारको छोरासँग बिहे गर भन्नुभएको रहेछ, हैन? बल्ल बुझेँ। मैले त बडो मेरो ख्याल राख्नुहुन्छ भन्ने सोचेकी थिएँ।
रेखा फत्फताउँदै कोठाबाट बाहिरिन्छिन्।
स्थान : आफ्नै घर
रेखा एक्लै कोठामा बसिरहेकी छन्। फोनको घन्टी बज्छ।
आवाज : हेलो रेखा, म छवि।
रेखा (मलिन स्वरमा) : हेलो, छवि सर।
आवाज : म तिमीलाई एउटा नयाँ प्रस्ताव राख्न चाहन्छु।
रेखा : भन्नुस् न!
आवाज : तिमी नराम्रो नमान, है!
रेखा : पहिला प्रस्ताव सुनूँ।
आवाज : तिमी मसँग बिहे गर्छौ?
रेखा स्तब्ध हुन्छिन्। उनी जवाफ दिन सक्दिनन्।
पात्र : रेखा थापा र उनका परिवारका सदस्य
रेखाको कान्छो भाइ मुर्मुरिरहेका छन्। रेखाले छविको प्रस्तावबारे घरमा सबैलाई बताइसकेका हुन्छन्।
भाइ : त्यो छवि भन्नेलाई मैले जानेको छु।
उनी सर्टको बाहुला तानेर पाखुरा सुर्कंदै कोठामा यताउति गरिरहेका छन्। रेखाका बुवा शान्त भएर बसिरहेका छन्। रेखा पनि केही बोलेकी छैन।
भाइ : त्यसको अफिस देखेको छैन र मैले! अफिसमै गएर हातखुट्टा भाँचिदिन्छु।
रेखा आफ्नो कोठाबाट सबै परिवारसामु आउँछिन्।
रेखा : बुबा, म छविसँग बिहे गर्न तयार छु।
उनका बुवा र परिवारका सदस्य चकित हुन्छन्।
रेखा : बुबा, म चाहन्छु तपार्इं एकचोटि छविलाई भेट्नुस्। तपार्इं जे निर्णय गर्नुहुन्छ, म त्यसमा सहमत छु।
सबै परिवार डल्लो परेर कोठामा बसेका छन्। रेखाका बुबा कोठाभित्र छिर्छन्। उनको गहभरि आँसु छ। बुबालाई रोएर आइरहेको देखेर सबै जर्‍याकजुरुक उठ्छन्।
रेखा : बुबा के भो?
बुबा केही बोल्न सक्दैनन्। उनी रेखालाई अँगालो मार्छन्। उनको आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र धारा बहिरहन्छ।
पात्र : रेखा थापा र म (लेखक)
स्थान : कमलादीस्थित ओमकार नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र
रेखा : त्यो बुबाको सहमति थियो। तर परिवार सबै माने पनि मलाई तामझामसाथ बिहे गर्न लाज लाग्यो। हामीले बिहेको घोषणा गर्‍यौं, अनि सँगै बस्न थाल्यौं।
रेखा मलाई आफ्नो र छविको बिहेबारे सुनाइरहेकी छन्। म टेपरेकर्डर तेर्स्याएर उनको आवाज रेकर्ड गरिरहेको छु।
रेखा : मलाई छवि श्रीमानभन्दा पनि अभिभावकजस्तो लाग्छ। मलाई खासमा उहाँको आँट मन परेको हो। लरतरो मान्छेले आफूभन्दा आधा उमेरकी केटीलाई सोझै 'तिमी मसँग बिहे गर्छौ?' भनेर सोध्न सक्दैन। मलाई लाग्यो, बिहे त गर्नै छ। यो चुनौती थियो मेरा लागि, मैले स्वीकार गरेँ। मनको कुनै कुनामा बिहे गरेर फिल्म खेल्न थाले नानाथरिका अफवाहबाट बचिन्छ भन्ने लोभ पनि जाग्यो होला।
म : तर अहिले त तपार्इंहरूबीच असमझदारी बढेको छ भनिन्छ नि?
रेखा : उमेरको अन्तरले विचारमा केही फरक हुनसक्छ। तर यसलाई असमझदारी भन्ने म मान्दिनँ। छविले हमेसा मलाई बाटो देखाएका छन्। के सही हो, के गलत हो बुझाएका छन्। यसले मेरो करिअर यहाँसम्म आइपुग्न फाइदा गरेको ठान्छु म। हो, केही विषयमा कुरा मिल्दैनन्। जस्तो मलाई पनि एउटी सामान्य केटीजस्तै आफू रिसाउँदा उनले माया गरेर फकाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। सिनेमा हेर्न, सपिङ गर्न, अनि कतै लामो बिदामा घुम्न जान मन लाग्छ। तर छवि मान्दैनन्। सार्वजनिक रूपमा फिल्म हेर्न जाँदा, बजार घुम्दा मेरो करिअरमा धक्का लाग्छ, मान्छेहरू कुरा काट्छ भन्छन्। यस्तो सामान्य ठासठुस त कसको परिवारमा हुँदैन र?
तर मेरो एकदमै ख्याल राख्छन्। एउटै फिल्डमा काम गर्ने भएकाले मेरो सुटिङ, रेकर्डिङ, रिहर्सल सबै काममा उनको सहयोग हुन्छ। मलाई सुटिङका लागि तयार गराउने सबै उसकै जिम्मा हो। एकदमै मिठो खाना बनाउँछन्, छवि। हेर्नुस् न, उसले पकाएको खाँदाखाँदा मोटाइसकेँ।
(उनी खुलेर हाँस्छिन्।)
« Reply #67 on: February 14, 2010, 02:42:56 PM »
« Reply #68 on: February 14, 2010, 02:43:54 PM »
« Reply #69 on: February 17, 2010, 07:06:01 AM »